1500kva 12 ဆလင်ဒါဒယ်လီထုတ်လုပ်သူသည်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူမှ 1000 ပြည့်ကြာလောင်စာဆီတိုင်ကီနှင့်အတူ MECCA Power
နေအိမ် / ကုန်ပစ္စည်းစာရင်း / အမှတ်တံဆိပ်အင်ဂျင် / လူယောကျ်ား / 1000kva လူဒီဇယ်မီးစက် 1000L လောင်စာဆီတိုင်ကီနှင့်အတူ
1000kva လူဒီဇယ်မီးစက် 1000L လောင်စာဆီတိုင်ကီနှင့်အတူ
MECCA POWER}}} 1000kva လူဒီဇယ်လောင်စာဆီ
ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြိုင်အဆိုင်မြင့်သောဗို့အား Gensets ၏ရှုပ်ထွေးသော Loaded Magazation စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာကဏ္ emposition အတွက်အထူးပါဝါစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကိုအထူးထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်အပြိုင်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် Controller တို့ပေါင်းစပ်ထားသည့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အပြိုင်နှင့် Controller တို့ပေါင်းစပ်ထားသည့်အလိုအလျောက်လျှပ်စစ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဖြစ်သည်။
4. အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့် multi-directional စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းသည် ပိုမို. ပြည့်စုံသောကာကွယ်မှုပြုလုပ်ပါ။
5. အရည်အသွေးမြင့် avr တပ်ဆင်ထားသည့် High Voltage Genset သည် alternator ကိုထိရောက်စွာကာကွယ်ရန်အတွက်အမြင့်ဆုံးဗို့အား genset ကို 300% သက်တမ်းရှိသည်။
6. Automatic switching mode ကို arole switch ကို Genset Switch မှလက်ခံသည်။ လက်ရှိသို့မဟုတ်တိုတောင်းသော circuit ကိုကျော်သည့်အခါ switch သည်အလိုအလျောက်အဆက်ပြတ်လိမ့်မည်။
1000kva လူဒီဇယ်ထုတ်လုပ်သူ 1000l လောင်စာဆီတိုင်ကီနှင့်အတူဒီဇယ်ထုတ်လုပ်သူ 12 ဆလင်ဒါဒယ်လီထုတ်လုပ်သူ 1500kva လူဒီဇယ်ထုတ်လုပ်သူ Man ဒီဇယ် genset Man ဒီဇယ်ရောင်ချိန် 1000L လောင်စာဆီတိုင်ကီနှင့်အတူ Man Generator 12 ဆလင်ဒါဒီဇယ်ထုတ်လုပ်သူ 1000l လောင်စာဆီတိုင်ကီမီးသတ် 1500kva ဒီဇယ်ဆီထုတ်လုပ်သူ